तपाईको आज सोमवारको राशिफल, हेर्नुहोस् क-कसलाई छ त विशेष शुभ ? « Sansar News
तपाईको आज सोमवारको राशिफल, हेर्नुहोस् क-कसलाई छ त विशेष शुभ ?
३ माघ २०७८, सोमबार ०७:५८
परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्नेछ भने विवादास्पद जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ला। पछिका लागि सम्भावना देखिए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउनेछन्। धेरै समय अरूकै लागि जुट्नुपर्ला। कामका लागि संघर्ष गर्नुपर्ला। श्रम परे पनि उपलब्धि कम हुने देखिन्छ।
२०७८ माघ ३ गते, सोमवार, १७ जनवरी, २०२१
आज आइतवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात